20%off Traditional Foot Massage 👣👣 - Mr. Discount (Myanmar)
Home / Offers / 20%off Traditional Foot Massage 👣👣
20%off Traditional Foot Massage 👣👣
Happy Sweet December ပါနော်!!
Happy Sweet December ပါနော်!!🎄🎄🎄🎄🎄Myan Spa ကိုအစဉ်အမြဲလာရောက်အားပေးကြတဲ့ customer များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် 1.12.2019 မှ 14.12.2019 အထိ Traditional Foot Massage 👣👣ကို 20%offပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် 👍👍👍
🎄🎄60 minutes ကို 12000kyats ပဲကျသင့်တော့မှာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်စေဖို့ အမြန်ဆုံးလာရောက်ခဲ့ကြပါလို့
👣👣Foot Massage ကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့့်Myan Spa ချစ်သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း၊နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်
Myan Spa မှ ဤ Promotion သည် December 14, 2019 အထိသာဖြစ်ပြီး Promotion တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Promotion အား ဤ website တွင် စတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသော နေ့မှာ December 1 2019 ဖြစ်ပြီး Myan Spa မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤ Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက Myan Spa ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။